Aluminum Window Screen - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Kpara waya ntupu
Aguba waya nwere ogwu ntupu
Hot-Itinye kpaliri welded waya ntupu
Aluminum window ihuenyo ka nke al-mg alloy waya na larịị ịkpa ákwà. Aluminum waya ntupu dara gaa n'òtù abụọ: aluminum magnesium alloy waya ntupu ma dị ọcha aluminum waya ntupu, kpara na iche iche na aluminum alloy waya ọcha aluminum waya. Al anwụnta ihuenyo agba: Silver na-egbuke egbuke ma ọ bụ unyi. Aluminum Alloy ahụhụ echetakwa bụ oké ọnụ karịa faiba glaasi ntupu ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ inogide. Aluminum echetakwa siri ike na inogide, a na 18 x 16 ntupu, 0,011 n'obosara screening, adabara ...
FOB Price: US $ 3 - 10 / mpempe akwụkwọ
Min.Order ibu: 20 mpempe akwụkwọ / Ibé akwụkwọ
Tụkwasịnụ Ikike: 5000 mpempe akwụkwọ / Ibé akwụkwọ kwa Day
Aluminum window ihuenyo ka nke al-mg alloy waya na larịị ịkpa ákwà.
Aluminum waya ntupu dara gaa n'òtù abụọ: aluminum magnesium alloy waya ntupu na ọcha aluminum waya ntupu , kpara na iche iche na aluminum alloy waya ọcha aluminum waya.
Al anwụnta ihuenyo agba: Silver na-egbuke egbuke ma ọ bụ unyi.
Aluminum Alloy ahụhụ echetakwa bụ oké ọnụ karịa faiba glaasi ntupu ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ inogide.
Aluminum echetakwa siri ike na inogide, a na 18 x 16 ntupu, 0,011 n'obosara screening, adabara ọtụtụ ụzọ na window ngwa. Aluminum window ihuenyo agaghị ajari ma ọ bụ ebù. Ọnọ ke apụta ma ọ bụ ịkpụ iberibe.
Ahụhụ ntupu nwere ìhè arọ, ezi corrosion na-eguzogide na nchara na-eguzogide
Ngwa: Dị ka ụmụ ahụhụ na echetakwa ma ọ bụ ndò megide ijiji na anwụnta, ígwè nchedo, ventilashion ihe onwunwe na inweta n'ókè.
Anyị na-ezitekwara ahụhụ ntupu usoro, nke na-kpọmkwem haziri maka windo na ibo ụzọ, na zuru okè n'ihi na ma anụ ụlọ na ndị azụmahịa were.
Otú mfe ọ bụ iji wụnye ahụhụ ntupu?
Ahụhụ ntupu dị mfe iji wụnye. All anyị iche nwere ike a ga-ebipụ na ike na mkpa, na mgbe ahụ na nanị stapled ma ọ bụ glued n'ime ebe.
Olee otú ogologo ga ahụhụ ntupu-adịru?
The ndu ndimmadu nke ụmụ ahụhụ na ntupu ga-adabere na ihe onwunwe na-eji, na otú mgbe ọ bụ isiokwu na-eyi na dọkatụrụ adọka. Ndị kasị ike-yi ntupu anyị na-ere bụ nke mere ka nke metal, na nke a bụ dị na ma igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ aluminum.
Anyị faiba glaasi na ịkwanyere ntekwasa ígwè ntupu dị ọnụ ala uzo ozo, ma N'ihi na ha bụ ndị ọzọ siri na kwesịrị na-eji n'ime ụlọ. Otú ọ dị, anyị Pita ntupu bụ nnọọ ike, na-mere si polyester na a naịlọn isi.
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti gbasaa na kpara ụmụ ahụhụ na ntupu ?
Nnọọ nanị, gbasaa ntupu ike ma na-eme ya udi mgbe ọ na-ehuda, ebe kpara ntupu bụ nnọọ mfe bee na ehulata nke udi.
Ebe m nwere ike ịzụta ụmụ ahụhụ na ntupu?
Ọ bụrụ na ị ga-achọ enyemaka ọ bụla na gị zụọ biko egbula ekwentị anyị na 0086-311-69013206 ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ na online chat.
Previous: Chain Link ngere
Osote: Kpaliri welded Gabion ntupu
Electro kpaliri Waya
Staninless Steel waya ntupu
Ịkwanyere ntekwasa welded waya ntupu
Hebei Samsung Metal waya ntupu Nlụpụta Co., Ltd
Ekwentị: 0086-311 69013206 69013200
Ekwentị: 0086-311 80662955 80662956